Iindaba - Ithemba lokuhlanjwa kweplastiki kunye nezixhobo zokurisayikilisha
NgoJulayi ka-2017, owayengumphathiswa wezokhuselo lokusingqongileyo wahlengahlengisa kwaye wadwelisa iintlobo ezingama-24 "zenkunkuma yamanye amazwe" eqinileyo kubandakanya iiplastikhi zenkunkuma kunye nephepha lenkunkuma kwikhathalogu yokungeniswa kwenkunkuma eqinileyo, kwaye yaphumeza ukuthintelwa kokungeniswa kwezi "nkunkuma zangaphandle" ukusukela ngoDisemba 31, 2017. Emva konyaka wokubila kunye nokuphunyezwa ngo-2018, umthamo wokungeniswa kwenkunkuma yangaphandle yeplastiki eChina wehla ngokukhawuleza, okwakhokelela ekuqhambukeni kweengxaki zenkunkuma eYurophu, eMelika, eLatin America, e-Asia nase-Afrika.
Ngenxa yokuphunyezwa kwemigaqo-nkqubo, umsantsa wonyango lwenkunkuma kumazwe awahlukeneyo uyanda. Amazwe amaninzi kufuneka ajongane nengxaki yokulahla inkunkuma yeplastiki kunye nolunye udoti ngokwawo. Kwixesha elidlulileyo, bezinokupakishwa kwaye zithunyelwe eTshayina, kodwa ngoku zinokugaywa kuphela ekhaya.
Ke ngoko, ibango lokucocwa kweplastikhi kunye nezixhobo zokurisayikilisha kumazwe ahlukeneyo ziyanda ngokukhawuleza, kubandakanya ukutyunyuzwa, ukucocwa, ukuhlela, igranulation kunye nezinye izixhobo zeplastiki, eziza kuthi zenze ixesha lokutsiba eliphambili kunye nexesha lokuqhambuka. Ngokwandiswa kokuvalwa kwenkunkuma yelizwe langaphandle e-China kunye nokuphuculwa kolwazi lokunyangwa kwenkunkuma kumazwe ahlukeneyo, ishishini lokurisayikilisha liya kukhula ngendlela yokuqhushumba kule minyaka mihlanu izayo. Inkampani yethu iyakhawulezisa ukuveliswa kunye nokukhuthazwa kwezixhobo ezinje ukuze ibambe amaza amazwe kunye nokwenza uthotho lwemveliso yenkampani ibanzi.
Kumdibaniso wanamhlanje wehlabathi, onke amazwe axhumene ngokusondeleyo. Iingxaki zokusingqongileyo kwilizwe ngalinye ziyingxaki yokusingqongileyo koluntu lonke. Kushishino ngokutsha kweplastiki, sinoxanduva kunye noxanduva ukomeleza ishishini lokurisayikilisha zeplastiki nolawulo lokusingqongileyo koluntu. Ekuveliseni izixhobo zethu, kodwa nokusingqongileyo yonke, masijongane nekamva elihle nelicocekileyo.
Ndinqwenela abantu belizwe ngalinye indawo yokuhlala ecocekileyo kunye nobomi obungcono nobungcono boluntu lonke. Ukukhula okunempilo, ukungakhathali.